Ukuu: Isixhobo sokufaka kunye nokuhlaziya i-kernel ngokulula | Ubunlog
Ukuu: Isixhobo sokufaka kunye nokuhlaziya iKernel ngokulula
Ngeli xesha Ndiza kuthatha ithuba ukukuxelela kancinci malunga ne-Ukuu (Ubuntu Kernel Uphuculo lweeNkonzo), Isixhobo esihle ukuba izakufumana indawo ngaphakathi kwirejista yakho yezicelo ekufuneka zibe ngaphakathi kwenkqubo yakho.
Kuyinyani ukuba umsebenzi wokuhlaziya i-Kernel yenkqubo yethu ihlala inesidina xa ingumsebenzi owenziwa rhoqo, oku ukonwabela uhlaziyo olutsha, ukuphucula kunye nokwenza ngcono koku kokudibanisa nezona ndawo zamva nje zokhuseleko.
Ewe, njengoko bendithetha nge Linux Kernel, kwesi sithuba ngena Ukuu isicelo esikhathalelayo loo msebenzi ukwenza ufakelo lweKernel.
Ukuba kukho nabani na kuni owonwabileyo ngokuzama iManjaro Linux, niyakwazi kancinci malunga nezixhobo zayo ezikhulu, nangona singesosithuba sokuthetha ngazo, kukho enye endiyithandayo kwaye sisisihlaziyi sayo esingumongo, Ukuu ngu iyafana nale.
Kulabo abangaziyo ukuba ndithetha ngantoni, inkcazo ekhawulezayo evela ku-Ukuu yile ngayo unokuhlaziya i-kernel kwindlela yakho ngendlela elula kwaye ngaphandle koloyiko lokonakalisa inkqubo yakho.
Esi sixhobo sinconyelwa ii-newbies kunye neengcali, njengoko kulawula ukwenza wonke umsebenzi, oqhele ukwenziwa ngumsebenzisi xa uhlaziya i-kernel.
Kufuneka iqatshelwe ukuba i-Ukuu isebenzisa kuphela ii-kernels "eziphambili" ezipapashwe yiCanonical. Kwaye ayisosisixhobo sodwa soBuntu, sisebenza ngokugqibeleleyo kwiziphumo ezinje ngeLinux Mint, Xubuntu, Kubuntu, njl.
1 Iimpawu zeUkuu.
2 Uyifaka njani iUkuu ku-Ubuntu 17.04?
3 Uyisebenzisa njani iUkuu?
Bonisa uluhlu lweenkozo.
Isicelo siqhubeka ngokujonga iipakeji zekernel ezintsha ezinikezelwa liqela loPhuculo loBuntu, lijonga ngqo kwi kernel.ubuntu.com
Ukuu, ukongeza ekukhangeleni iinguqu rhoqo zeKernel, uphethe ukukwazisa xa kukho iphakheji entsha ekhoyo.
Khuphela kwaye ufake iipakeji ngokuzenzekelayo
Umtsalane ophambili wesicelo kukulawula ukukhuphela iiphakheji zeKernel kunye nokufaka iKernel kwinkqubo yethu.
Uyifaka njani iUkuu ku-Ubuntu 17.04?
Ukuba ufuna ukuzama esi sixhobo, kuyakufuneka ukongeza indawo yokugcina izinto kwinkqubo yethu, ukusukela Ukuu ayikho kwii-repositories ezisemthethweni Ubuntu, koku siza kuvula i-terminal (Ctrl + T) kwaye ungeze lo myalelo ulandelayo:
Nje ukuba kwenziwe, siyaqhubeka nokuhlaziya oovimba beenkqubo zethu nge:
Kwaye ekugqibeleni senza ukufakwa kunye:
Ngoku kufuneka silinde ukufakela ukuba kwenziwe kwaye kunjalo.
Uyisebenzisa njani iUkuu?
Nje ukuba ufakelo lwenziwe kwinkqubo yethu, siqhubeka nokuvula usetyenziso kwisiphelo esinye, sichwetheza:
Isicelo siza kuvula kwaye siqalise ukukhuphela uluhlu lweenkozo ezikhoyo ukuze zifakelwe, ekupheleni kwenkqubo iwindow efana nale iya kuboniswa.
Kule festile sinokubona uluhlu apho sinazo zonke iinguqulelo zeKernel ezikhoyo kwinkqubo yethu.
Ngexesha emazantsi efestile yesicelo sinokusixabisa isaziso Oko kubonisa inguqulelo yethu efakiweyo kunye nohlobo lwamva nje lweKernel esemthethweni ekhoyo.
Kwiqhosha "izicwangciso”Sifumene useto lwesicelo, phakathi kwalo sifumene ukubanakho ukwenza izaziso, ukufihla iinguqulelo zoMgqatswa woKhupha, silungelelanisa ukuba kuya kujongwa kangaphi uhlaziyo kunye nokunye.
Nje ukuba uhlengahlengiso lwenziwe kwiimfuno zethu, ngoku apha kuya kufuneka ukhethe uhlobo lweKernel esifuna ukuyifaka kwinkqubo yethu, emva koko sicofe iqhosha u "Faka" kwaye iwindow entsha iya kuvula.
Kule festile kuya kusibonisa inkqubela phambili yokukhuphela kunye nokufakwa kweKernel, ekugqibeleni ukuba ayinangxaki iya kusibonisa ukuba inkqubo igqityiwe.
Apha kuya kufuneka siqale kabusha ikhompyuter ukuze utshintsho kwinkqubo lubonakale.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » software » Ukuu: Isixhobo sokufaka kunye nokuhlaziya iKernel ngokulula
UJoseph Enrique Monterroso Barrero sitsho
Hayi kwaye Ubuntu buya kufakwa njani kwiselfowuni?
Phendula kuJose Enrique Monterroso Barrero
jordi sarmiento sitsho
Awunakho ukufaka ifowuni yoqobo, into onokuyenza kukufaka izibuko le-ubports. Kodwa lumka ukuba zininzi iinguqulelo zophuhliso kwaye ezimbalwa zigqityiwe. https://ubports.com/page/get-ubuntu-touch
Phendula jordi sarmiento
UJosué Corrales sitsho
UJose Pablo Rojas Carranza
Phendula kuJosué Corrales
I-Adiante alvo imiselwe ukufumana iProjekthi yeCelida Celulite
yintoni eza kumbonisa ngendlela ethobekileyo kwaye ezimisele
Ukuphelisa le nto kubunzima obukrakra kangangokuba inyanzelisa ukondla bonke abantu basetyhini. https://kalpeducationsite.wordpress.com/2017/02/21/creating-college-success-starts-by-reading-this-article-2/
Phendula ku-https: //kalpeducationsite.wordpress.com/2017/02/21/creating-college-success-starts-by-reading-this-article-2/
gnano cellulite sitsho
Ukuqhubeka nokufunda zonke ii-informações njengezinto ezibalulekileyo,
Ukufumana imbumbulu yenkqubo, njengobuninzi ukoyisa ukufikelela
Fikelela kwiividiyo, cela inkqubo. http://seculartalkradio.com/author-tries-to-link-poverty-with-iq/
Phendula kwi-gnano cellulite
URichard Dano sitsho
Ndafaka i-Elementary OS kwilaptop enezixhobo eziphantsi kunyaka ophelileyo. Andikaze ndiyivuselele i-kernel. Isemva kakhulu, ndicinga ukuba iyi-4.4. Ngaba kufuneka ndiyihlaziye yakutshanje? Ukuba impendulo nguewe, ngaba esi sicelo siza kundinceda ukuyenza?
Phendula uRichard Dano
Umbuzo wesigidi seedola ngowokuba kunokwenzeka ukuba kulayishwe inkqubo ekhoyo xa utshintsha ikernel? Ndiza kuvavanya kwi-distro yovavanyo. Imibuliso kwaye njengesiqhelo inqaku elinomdla kakhulu. Ukubulisa.
Molo Daniyeli. Ukulayisha inkqubo kunzima, kodwa akunakwenzeka. Ngokufanelekileyo, fakela uguqulelo olutsha kwaye ungakhiphi into endala ude ubone ukuba yonke into ihamba ngokugqibeleleyo. Ukuba ayikuvumeli ukuba ungene, ungasoloko uqalisa ukuvela kuhlobo lwakudala lwekernel, sebenzisa Ukuu kwakhona, susa entsha (leyo ikunike iingxaki) kwaye wenze i "downgrade". Yinto eyandehlelayo kudala ku Kubuntu kwakungekho ngxaki. Ewe sicebisa ukuchukumisa i-kernel kuphela xa kukho imfuneko, umzekelo, ukuzama ukusombulula ingxaki ye-WiFi ngenxa yokungahambelani nezixhobo zethu zekhompyutha. Ukuba akukhange kubenjalo, eyona nto ikhuselekileyo nekhuselekileyo kukuhlala kwi-kernel esiyinikwa sisasazo.
Molweni nonke, faka indawo yokugcina Ukuu kwindawo yokuqala 5.1. Ndiyahlaziya kwaye xa ndifaka i-Ukuu indixelela ukuba ayinakuyifumana.
Ngaba iimeko zitshintshile? Injani ngoku intlawulo?
zzupdate, hlaziya inkqubo yakho Ubuntu ngomyalelo omnye kwisiphelo sendlela
Zeziphi iidesktophu ezinobunzima obukhoyo kwi-Ubuntu 17.04?